एकदिन नेपाली साहित्यलाई विश्वमा पुर्याउने बाचा गरेको छौ - sunaulokhabar.com
Home अन्तराष्ट्रिय समाचार एकदिन नेपाली साहित्यलाई विश्वमा पुर्याउने बाचा गरेको छौ
एकदिन नेपाली साहित्यलाई विश्वमा पुर्याउने बाचा गरेको छौ
लमजुंग धमिलीकुवा-३ स्थित माता जौमाया र मिता बुद्दिराम बिकबाट जन्मिनु भइ स्थानीय स्कूलबाट आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा शुरु गर्दै कालिका मा.बिबाट एसएलसी उतिर्ण गर्दै त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मास्टर गरि दश वर्ष नेपालकै रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा काम गरि सक्नु भएका, २०५८ देखि अमेरिकाको क्लोराड़ोमा रही नेपाली साहित्यलाई विश्वसामु पुर्याउने उदेश्य बोकेर हिड्नु भएका ब्यबसायी तथा साहित्यकार अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष पदम बिश्वकर्मा संग गरिएको कुराकानी :
अमेरिकाको कुन ठाउमा बस्नु हुन्छ ?
म अमेरिकाको क्लोराड़ो राज्यमा बस्छु ।
के गर्नु हुन्छ अमेरिकामा ?
अमेरिकामा मेरो पहिले यौटा नेपाली रेष्टुरेन्ट थियो, म त्यहि रेस्टुरेन्ट चलाउथे । अहिले चाही सेभेन इलेभेन भन्ने यौटा चेन स्टोर छ त्यो विभिन्न देशमा छरिएको छ । म त्यसको ओनर हु । त्यसको अलावा विभिन्न सामाजिक सस्थाहरुमा रहेर काम गर्छु ।
कुन कुन सस्थामा रहेर काम गर्नु हुन्छ ?
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा काम गरि रहेको छु । यो सस्थामा म सन् २००३ साल देखि नै संलग्न छु । पहिले समाजको क्लोराड़ो च्याप्टरको अध्यक्ष थिए । त्यस पश्चात सस्थाको महासचिबमा चुनाब लडे सबै साथीभाइले मलाई जिताउनु भयो । महासचिबको जिम्मेवारी सम्हाले पछी सस्थाको बिकास र सस्थागत हकहितको लागी अरु ज्यादा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।
त्यस पछी साहित्य समाजको अध्यक्ष पदमा निर्बाचित भए । आफ्ना सबै सहकर्की र सस्थाको आबश्यकता अनुसार दोश्रो पटक पनि अध्यक्षको जिम्मेवारीमै रहेर काम गरि रहेको छु ।
यो सस्था बाहेक अमेरिकामा स्थापना भएको नासो कम्युनिटी भन्ने सस्था छ । त्यो सस्थामा पनि केन्द्रीय सदस्य तथा महासचिब समेतको जिम्मेवारी सम्हालेर काम गरे । अहिले म त्यस सस्थामा सल्लाहकार छु ।
त्यस्तै अमेरिकाको क्लोराड़ोमै जातीय विभेद अन्त्यको लागी स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय मन्च (ग्लोबल फोरम) छ । विश्वमा छरिएर रहेका दलित समुदायलाई एकीकृत गर्ने, नेपालमा भएको दलित मुक्ति आन्दोलन र बिकासलाई सहयोग गर्नका लागी स्थापना भएको सो सामाजिक सस्थामा उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गरि रहेको छु ।
त्यस बाहेक एनआरएन लगाएतका स्थानीयसस्थाहरुमा कुनैमा सल्लाहकार कुनैमा निबर्तमान सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर क्रियाशील छु ।
यो नासो भनेको चाही के नि ?
नासो भनेको चाही नेपाली कम्युनिटी फर अब्लिक सोसाइटी हो । नेपालमा पछाडी परेका बर्गको लागी काम गर्न अमेरिकामा स्थापित सामाजिक सस्था हो । यो २००६ देखि क्रियाशील छ । यसले स्थापनाकाल देखिने नेपाली दलित समुदायको हकहितको लागी सहयोग गर्दै आएको छ ।
नासो पनि दलित समुदायको बारेमा काम गर्छ , ग्लोबल फोरम पनि दलितकै बारेमा काम गर्छ, यो दुइ सस्थाको भिन्नता चाहि के छ ?
अलिकति फरक छ, नासो अमेरिकामा स्थापना भयो त्यहि सिमित छ । यसले अमेरिका भित्र रहेका दलित समुदायको लागि सुझाब सल्लाह र सहयोग गरि रहेको छ भने ग्लोबल फोरमले चाहि अन्तराष्ट्रिय रुपमा छरिएर रहेका दलित समुदायलाई समेटेर संगै अगाडी बढ्नु र बढाउनु पर्छ भन्ने उदेश्य लिएको सस्था हो यो अन्तराष्ट्रिय जगतमा फैली सकेको छ । विभिन्न देशमा यसको कन्ट्री च्याप्टरहरु समेत स्थापना भै सकेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको कहिले देखि अध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्दै हुनु हुन्छ ?
म २०१४ देखि यो सस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाली रहेको छु । २०१२ देखि १४ सम्म महासचिब थिए । यस सस्थाको दुइ बर्षे कार्यकाल हुन्छ । २०१६ देखी दोश्रो कार्यकाल सम्हाली रहेको छु ।
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले गर्ने मुख्य कामहरु के के हुन् ?
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली भाषा, सस्कृति र साहित्यको प्रचार प्रसार गर्ने र यसको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने यसको मुख्य काम हो ।
साहित्य समाजले अब चाही के गर्दै छ ?
साहित्य समाजले साबिक देखि मनाउदै र गर्दै आएको दिवशहरु मनाउने, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने । श्रष्टाहरुको सम्मान गर्ने र कृतिहरुको प्रकासन गर्ने, साहित्यिक सभा सम्मेलनहरुको आयोजना गर्ने नियमित काम छ भने नेपाली भाषा, साहित्य, सस्कृति र कलालाई बिश्वब्यापी बनाउने काममा अघि बढ्ने छ । यसको लागी नेपाली उत्कृष्ठ साहित्यहरुलाई अरु भाषाहरुमा अनुबाद गरेर विश्व बजारमा लैजाने योजना बनाएका छौ ।
विश्वमा छरिएर रहेका विभिन्न भाषी साहित्यकारहरुको विश्व सम्मेलन गरेर नेपाली साहित्यलाई जानकार गराउने देखि प्रचार प्रसार गराउने र विभिन्न देशमा भाषा साहित्यको पाठशालाहरु स्थापना गर्ने योजना बनाएका छौ ।
नेपाली अन्तराष्ट्रिय साहित्य समाजको कामलाई श्रस्टाहरुले मात्रै मन पराएका छन् कि राज्यले पनि ओन गरेको छ ?
मुख्यत हामी र हाम्रो कामलाई पब्लिक र श्रष्टाहरुको राम्रो माया र सहयोग रहदै आएको छ । विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीको लागी प्यारो सस्थाको रुपमा रहन सफल भएको छ । सरकार संग चाहि हामीले त्यति यादा सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छैनौ । नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्वमा पुर्याउनु हाम्रो कर्तब्य हो भन्ने हामीले महशुस गरेको छौ ।
सोहि अनुरुप हाम्रो ठुलो उपश्थिति तयार भै सकेको छ । हामी नेपाली विश्वको जुन सुकै ठाउमा रहे पनि नेपालीमन नेपालीपन अनि हाम्रो भाषा, साहित्य र सस्कृति हाम्रो सरिरमा कुदी रहेको भन्ने हामी महशुस गर्छौ ।
हाम्रो जस्तो राम्रो भाषा, साहित्यलाई विश्व सामु पुर्याउन सके जसरी आज विश्वले नेपाललाई सगरमाथाको देश भनेर चिन्छन त्यसरी नै हाम्रो भाषा, साहित्य र सस्कृतिले पनि भरिएको देश भनेर शिर ठाडो बनाउन सक्ने थियौ भनेर लागेका छौ त्यहि हुनाले पनि सरकारी स्तर बाट ज्यादा अपेक्षा गरेका छैनौ ।
नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्वसामु पुर्याउन राज्यले कस्तो पोलिसी ल्याईदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा, हामीले २५/२६ बर्षदेखी नेपाली भाषा, साहित्य, सस्कृति र कलालाई विश्वसामू पुर्याउन अहोरात्र लागी परि रहेका छौ । राज्यले त्यसलाई सम्झी दिए मात्र पनि हामी निकै खुशी हुने थियौ ।
दोश्रो कुरा, नेपाल सरकारको एउटा ठुलो मन्त्रालयले गर्ने काम हामीले स्वयंसेवी रुपमा गरि रहेका छौ । नेपाल सरकारले भाषा साहित्यलाई बिश्वब्यापी बनाउन कुनैन कुनै दृष्टिले ज्वाईन्टली काम गरि दिए हुन्थ्यो ।
तेश्रो कुरा, यहा राज्यको तवर बाट विभिन्न मान, पदवी र पुरस्कारहरु वितरण हुने गर्दछ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि अन्तराष्ट्रिय साहित्य समाजको माध्यमबाट त्यस्ता पुरस्कारहरु वितरण गर्ने बाताबरण मिलाई दिए सहि श्रष्टाले पुरस्कार पनि पाउने र नेपाली माटोलाई बिदेशी भूमिमा पनि बासना छर्न सफल भईने थियो भन्ने लागेको छ ।
तपाईहरु बिदेशमा रहेर पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्वसामु पुर्याउनु पर्छ भन्दै यति माया गरेर लागि पर्नु भएको छ, तर अहिलेको नेपाली पुस्ताले बिदेशी साहित्य प्रति लालाहित भएको देख्दा कस्तो महशुस गर्नु हुन्छ ?
यो दुबै आफ्नो आफ्नो बिचार हो । हामी नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्व सामू पुर्याउन लागि परि रहेका छौ भने अहिलेको युवापुस्ताहरु बिशेष गरि अंग्रेजी साहित्यमा रुची राख्ने, आफ्नो कलम चलाउने र पढ्ने गर्छन ।
जुन सुकै भाषामा साहित्य लेखे पनि उहाहरुको साहित्य नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने प्रकारकै हुन्छ । उहाहरुको कृतिले नेपाली साहित्यमा एउटा इँटा थप्ने मैले महशुस गरेको छु ।
उहाहरुको रचनाले नेपाली साहित्य क्षेत्रलाई अझ गाढा रुप दिन सक्छ । बिदेशी साहित्य पढेर नेपालीपन सहितको नया साहित्य लेख्दा केहीन केहि नया चिज आउछ भन्ने मलाई बिश्वास छ ।
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई विश्वको कति देशमा बिस्तार गरि सक्नु भएको छ ?
अहिले हाम्रो ५० वटा देशमा कमिटिनै बिस्तार भै सकेको छ । करिब १०० वटा च्याप्टरहरुबाट नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा काम भई रहेको छ ।
बिदेशी भूमिमा बसेर नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्वसामु परिचित गराउने अभियानमा आफ्नो दुखको केहि आकलन गर्नु भएको छ ?
यो सस्थागत संलग्नता र सस्थागत मिहिनेत हो । हामी बिशुद्द भोलेन्टियरली काम गर्ने भएको हुदा व्यक्तिगत खर्च मै काम गर्छौ । विभिन्न देशमा जानु तथा कार्यक्रमको आयोजना गर्न लगाउनु पर्छ खर्च त हुन्छ नै तर विभिन्न देशमा छरिएर रहेका भाषा, कला र साहित्यका कलम कर्मीहरुलाई संगठित गरेर नेपाली माटोलाई विश्वसामु परिचित गराउने यात्रा नै ठुलो कुरा हो, यो कुनै पैसा र सम्पति संग तुलना गर्न सकिदैन ।
साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील हुनु हुन्छ, दलित आन्दोलनमा चाहि कहिले देखि लाग्नु भएको थियो ?
हाम्रो बस्तीमा मेरो परिवार अलि शिक्षित परिवार थियो । मेरो दाजु स्कूलको शिक्षक हुनु हुन्थ्यो । उहाबाटै मैले धेरै ज्ञान आर्जन गरे । हामी उत्पीडित समुदायको मानिस भएको हुनाले पनि होला बिद्रोही स्वभावको थिए । मैले स्कूलमा पढदा देखिने आफु र आफ्ना समुदाय माथि हुने विभेद र अन्यायको बिरुद्दमा अग्रपंकिमा रहेर आवाज उठाउन शुरु गरेको हु ।
त्यस बखत सामाजमा रहेको बालीघरे प्रथा, हली प्रथाको बिरुद्दमा मैले नेतृत्व गरेको थिए । दलित बालबालिकालाई स्कूल पढाउन अभियान नै गरेको थिए । चिया पशल देखि होटेलहरुमा खाएको भाडा माझ्ने चलन थियो त्यसको बिरुद्दमा अभियान नै संचालन गरेको थियौ।
कलेज पढ्न काठमाडौँ आए पछी पनि दलित समुदायको हकहितको लागि अन्चलाधिश लाई ज्ञापन पत्र बुझाउने देखि गोर्खाको कालिका मन्दिर प्रवेश जस्ता कामहरु गरेउं । हामी समाजबिकास छात्राबासमा बस्ने भएको हुनाले शिक्षित युवाहरुको जमघट हुन्थ्यो । त्यहि छात्रबासकै छतमा हामी दलित मुक्तिको कुरा गरेर योजना बनाउने गर्थ्यौ ।
तपाई आफुले आजसम्म जातीय छुवाछुतको सिकार बन्नु परेको छ ?
धेरै पटक भईएको छ । यो त असह्यै छ । गनेर पनि साध्य हुदैन । ति दिनका पीडाहरु आज पनि ताजै छन् । धारामा पानि थाप्न जादा मानिसहरु साइड लागेर बस्ने, पानी खानु पर्दा उनीहरुले हाली दिने अनि आफुले हात थापेर खानु पर्ने, चिया पसलमा जादा आफुले खाएको गलासहरू माझ्नु पर्ने, संगैका साथिहरुपनि आफु संग बसेर नखाने ।
उनीहरु चाही हाम्रो घरभित्रै गएर खान हुने तर उनीहरुकोमा हामी गयौ भने भित्र पस्ने त के कुरा संगै बस्न समेत नहुने । त्यो कलिलो मश्तिक्समा परेको त्यसबेलाको दवाब कहिल्यै बिर्सन नसक्ने भेदभावजन्य अनुभवहरु प्रसस्त व्यहोरेको छु मैले ।
अमेरिका गएर चाही जातीय छुवाछुतको पिडा भोग्नु परेको छ कि छैन ?
यहा जस्तो जतासुकै र जस्तो सुकै चाही हैन मोड अफ डीस्क्रिमिनेसन चाही फरक छ । नदेखिने प्रकारका बौदिक तरिकाले डीस्क्रिमिनेसन हुन्छ । हामी नेपाली जहा जहा पुगेका छौ त्यहा हाम्रो रित अनि विभेदजन्य सस्कृत लिएरै गएका छौ । नेपालमा जस्तो नभए पनि फरक किसिमले अलि अलि हुन्छ । नेपालीको भिडमा अलि अलि कहिँ कतै नदेखिने प्रकारले त्यस्ता ब्यबहार हुने गर्छ ।
साहित्य समाजमा लामो समयदेखि नेतृत्व गरि रहनु भएको छ त्यहा बसेर काम गर्दा आफु दलित भएको फिल गर्नु परेको छ कि छैन ?
साहित्य समाज भित्र काम गरि रहदा कहिले त्यस्तो फिल गर्नु परेको छैन, मैले त्यस्तो फिल हुने काम गर्ने बाताबरण पनि दिएको छैन । सबैले सबैलाई उत्तिकै सम्मान गर्छौ ।
अमेरिका जस्तो ब्यस्त ठाउमा ब्यबसाय पनि गर्नु हुन्छ, यतिका सस्थाहरुमा पनि समय दिन भ्याउनु भएको छ, कसरी समय म्यानेज गर्नु हुन्छ ?
समय भन्ने कुरा मनको इच्छा संग हिडेको हुन्छ । पारिवारिक तालमेल मिले पछी समय निकाल्न र काम गर्न सजिलै हुदो रहेछ । मलाइ काम गर्न मेरो श्रीमतीको ठुलो सहयोग रहेको छ । सायद परिवारको राम्रो सहयोग नहुने हो भने काम गर्न त्यति सहज हुने थिएँन होला ।
मेरो छोराहरुले पनि आसाध्यै सहयोग गर्छन । अरु भन्दा पनि ज्यादा मलाई समाज अनि साथीभाईले सहयोग अनि माया गर्नु हुन्छ । मैले पारिवारिक टेन्सन लिनु परेको छैन। अर्को मुख्य कुरा, “समाजसेवा गर्ने भावना मन भित्र छ भने कहिँ कसैले र केहिले पनि रोक्न सक्दैन” जस्तो लाग्छ ।
अमेरिकामा आफ्नो कर्मथलो बनाए पनि नेपाली दलितको बारेमा धेरै महत्वका साथ हेर्नु हुन्छ, के भै दिए नेपाली दलित समुदायले आत्मसम्मानित भएर बस्ने थिए जस्तो लाग्छ ?
मुख्य कुरा त हाम्रो दलित समुदायमा पनि धेरै गुट उपगुटहरु छन् । यसप्रकारको गुट उपगुटले हामीलाई सफलताको बिन्दुमा पुग्न कठिन बनाउछ । हामी सामुहिकतामा आधारित भएर आन्दोलनमा जुट्नु पर्छ । भर्खरै जारी भएको नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकार र हित सम्बन्धि भएका ब्यबस्थाहरुको प्रोपर कार्यान्वायन भए निकै प्रगतिको बाटोमा दलित समुदाय लाग्ने थिए ।
नेपाली दलितको हक, हित र समृद्दिको लागी केहि योजना बनाउनु भएको छ कि ?
दलित आन्दोलनको बारेमा सस्थागत रुपमा ग्लोबल फोरमले सकेको सहयोग गर्दै आएको छ । दलित सौदय माथि भएका घटनाहरुमा हामीले सकेको सहयोग गर्दै आएका छौ । अब चाहि हामीले
ग्लोबल फोरम मार्फत दलितको आर्थिक बिकास र दलित बालबच्चाको शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बनएका छौ । आगामी वर्ष देखि १०० बच्चालाई हामीले पढाउने योजना छ भने ग्लोबल फोरम द्वारा दलित समृद्दिको लागि उद्दोगहरुको योजना तयार हुदैछ ।